WhatsApp Archives - Technology Khabar
कोभिड-१९ को कारणले गर्दा मेसेजिङ्ग एप ह्वाट्सएपको प्रयोग ४० प्रतिशतले बढ्यो
कोरोनाभाइरसका कारण सोशल मिडियाको प्रयोग निकै उच्च देखिएको छ । अधिकांश मानिसहरु अनलाइनमा जाँदा सकेसम्म परिवार, आफन्त र साथीभाईहरुसँग नजिक रहन चाहन्छन् । त्यसैले होला मेसेजिङ्ग तथा च्याटिंग एप ह्वा्टसएपको […]
ह्वाट्सएपले नयाँ फिचर ल्याउँदै, केहि समयपछि म्यासेज आफैं डिलिट हुने ‘अटो डिलीट’ आउँदै
ह्वाट्सएपले हालैमा आफ्नो नयाँ फिचर डार्क मोडलाई लन्च गरेको थियो । यस फिचरलाई यूजरहरुले निकै समयदेखि कुरिरहेका थिए । र हाल ह्वाट्सएपले फेरी अर्को नयाँ फिचर ल्याउँदै गरेको खुलासा भएको […]
काठमाडौं । ह्वाट्सएप आईओएस र एन्ड्रोएड दुबैको लागी उपयुक्त रहेको छ । कहिले काँहि प्रयोगकर्ताहरुले आइओएसबाट एन्ड्रोएड फोनमा आफ्नो ह्वाट्सएप म्यासेजलाई ट्रान्सफर गर्न चाहन्छन् तरपनि उनिहरुलाई यसको सजिलो तरिका थाहा […]
काठमाडौं । च्याटिंङ्ग एप ह्वाट्सएप पुरा विश्वभर एन्ड्रोएड मोबाइलमा मात्रै पाँच अर्ब भन्दा बढी इन्स्टल भएको छ। पाँच अर्ब डाउनलोड पार गर्ने यो दोस्रो नन गूगल अर्थात गूगलले बनाएको नभई […]
ह्वाट्सएप चलाउनुहुन्छ ? त्यसोभए थाहा पाईराख्नुस् ह्वाट्सएपका एकदमै नयाँ यी फिचरहरु
काठमाडौं । तपाईँ ह्वाट्सएप कत्तिको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? नियमित चलाउनुहुन्छ भने हालै जोडिएको नयाँ फिचर्स जसको बारेमा तपाईँलाई जानकारी छ ? यदि छैन भने हामी यहाँ ती फिचरहरुको बारेमा बताउनेछौं […]
काठमाडौं । मेसेजिंग एप ह्वाट्सएपले आफ्नो एपको सपोर्ट पुराना अपरेटिंग सिस्टमका लागि बन्द गर्ने भएको छ । कम्पनीका लाखौं प्रयोगकर्ताहरुका स्मार्टफोनमा यो एपले आगामी दिनमा काम गर्न छोड्नेछ । फेसबुकको […]
काठमाडौं । यदि तपाईँ मेसेजिंग एप ह्वाटसएप प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सर्तक हुनुहोस्, ह्याकरहरुले तपाईको एकाउन्ट ह्याक गर्न भिडियो फाइलको सहारा लिने गरेको जानकारी आएको छ । ह्याकरहरुको निशानामा तपाईँको एकाउन्ट […]
काठमाडौं । सोशियल मिडिया कम्पनी फेसबुकले आफ्नो कम्पनीको नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो एप्लिकेसन भन्दा फरक देखाउन नयाँ लोगो ल्याएको बताएको छ । कम्पनीले नयाँ ब्राण्ड लोगो […]
एन्ड्रोइड मोबाइल फोनका लागि ह्वाट्सएपको फिंगरप्रिन्ट लक फीचर आयो, यसरी गर्नुस् प्रयोग
काठमाडौं । एन्ड्रोयड स्मार्टफोनमा ह्वाट्सएप प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताका लागि खुशीको समाचार छ। अब एन्ड्रोइड मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूले ह्वाट्सएपमा फिंगरप्रिन्ट लक पनि प्रयोग गर्न सक्दछन्। ह्वाट्सएपले पहिले यो सुविधा आईओएसको लागि […]
काठमाडौं । सोशियल मिडिया जायन्ट फेसबुकमा दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ताहरुको संख्या ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कम्पनीको सेप्टेम्बर २०१९ चौमासिकका अनुसार हाल दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ताहरु १ अर्ब ६२ करोडले फेसबुक […]
स्मार्टफोनहरु ह्याक गरेको आरोपमा मेसेजिंग एप ह्वाट्सएपद्धारा जासुसी एजेन्सीलाई मुद्धा
काठमाडौं । इन्स्ट्यान्ट मेसेजिंग एप ह्वाट्सएपले जासुसी एजेन्सी एनएसओ ग्रुपको विरुद्धमा अमेरिकी फेडरल कोर्टमा मुद्धा दायर गरेको छ । यो इजरायलको एजेन्सी हो र ह्वाट्स एपले कयौं पटक गलत तरिकाबाट […]
काठमाडौं । सोशल मिडियामा अधिक समय बिताउने बारेमा अधिकांश मानिसहरु त्यसलाई समयको दूरुपयोग भनेर मान्ने गर्दछन् । तर इन्टरनेशनल जर्नल अफ ह्यूमन कम्प्यूटर स्टडीजकाअनुसार भने टेक्स्टमा आधारित मेसेजिंग एप ह्वाट्सएपमा […]
ह्वाट्सएपमा मालवेयर राखेर जासूसी, भ्वाइस कलमार्फत डाटा चोर्ने सफ्टवेयर इन्स्टल
काठमाडौं । इन्टान्ट मेसेजिंग एप ह्वाट्सएपमा यूजर्सको कल ह्याक गर्न सकिने गंभिर जोखिम भेटिएको छ । ह्वाट्सएपले हालै सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार यूजर्सको फोन टाढैबाट पनि सिधै ह्याक गर्न सकिने किसिमको […]
काठमाडौं । श्रीलंकाले आइतवार भएको बम विस्फोटको श्रृंखलाबद्ध घट्नापछि अस्थाईरुपमा सामाजिक संजाल बन्द गरेको छ । दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलंकाका विभिन्न स्थानहरुमा क्रिस्चियन धर्माबलम्बीहरुलाई लक्षित गरेर इष्टर सण्डेको दिनमा चर्चहरु […]
इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र फेसबुकको म्यासेन्जर एक आपसमा जोडिँदै
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्ना तीन म्यासेजिङ्ग सेवालाई एकिकृत गर्ने तयारी गरेको छ । फेसबुकअन्तरगत संचालन भईरहेको इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र फेसबुकको म्यासेन्जरलाई एकैस्थानमा जोड्ने तयारी गरेको हो। तीनवटै एपहरुले स्वतन्त्र र […]
काठमाडौं । फेसबुक इंकको च्याटिंग एप ह्वाट्सएपले WhatsApp अब यूजरले फरवार्ड गर्ने मेसेजलाई ५ जनासम्म सिमित गरेको छ । कम्पनीले विश्वव्यापीरुपमा नै प्रयोगकर्ताले एउटा मेसेजलाई पाँच जनासम्मलाई मात्र फरवार्ड गर्न […]
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले अबदेखि कार्यालय समयमा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । ‘अर्थ मन्त्रालय र अन्तरगतका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७५’ जारी गर्दै मन्त्रालय र त्यसमातहतका कुनैपनि कर्मचारीले […]
ह्वाट्सएपले डिलीट गर्यो १ लाख बढि अकाउन्ट, कतै तपाईँको अकाउन्ट पनि बन्द भयो की
काठमाडौं । च्याटिंग एम ह्वाट्सएपले पछिल्ला दिनहरुमा चाइल्ड पोर्नोग्राफीमा निकै कडा नियमन गरिरहेको छ । ह्वाट्सएपमा विश्वका कयौं देशहरुमा चाइल्ड पोर्नोग्राफीका लागि ग्रुप्स बनाईरहेको र यी ग्रुपहरुमा विभिन्न किसिमका कन्टेन्टहरु […]
यी मोबाइल फोनहरुमा अब च्याटिंग एप ‘ह्वाट्सएप’ नचल्ने, फेसबुकले दियो जानकारी
काठमाडौं । फेसबुकले अंग्रेजी नयाँ वर्षको शुरुवातमै ह्वाट्सएप प्रयोगकर्ताहरुलाई जानकारी दिँदै विभिन्न डिभाइसहरुमा ह्वाट्सएप नचल्ले घोषणा गरेको छ । फेसबुकको अधिनमा रहेको ह्वाट्सएपले अब नयाँ वर्षदेखि पुराना डिभाइसहरु तथा अपरेटिंग […]
६० लाख भन्दा बढि स्मार्टफोनमा ह्वाट्सएप नचल्ने, तपाईँको पनि पर्यो की
काठमाडौं । ह्वाट्सएप निकै लोकप्रिय मेसेजिंग तथा च्याटिंग एपको रुपमा परिचित छ । विश्वभर करिब ५० करोड मानिसहरुले ह्वाट्सएप चलाउने गर्दछन् । नेपालमा पनि ह्वाट्सएपका प्रयोगकर्ताहरुको संख्या राम्रै रहेको छ […]
योग गुरु रामदेवको कम्पनीले ल्यायो मेसेजिंग एप, ह्वाट्सएपलाई टक्कर दिने योजना
काठमाडौं । भारतीय योग गुरु रामदेवको कम्पनीले पछिल्लो दिनहरुमा टेलीकम सेक्टरमा नयाँ नयाँ सेवाहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हालै रामेदवको कम्पनी पतंजलिले नयाँ मेसेजिंग एप सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले […]
काठमाडौं, १ मंसिर । इन्स्ट्यान्ट म्यासेजिङ प्लेटफर्म ह्वाट्सएपले (WhatsApp) नयाँ फिचर थप गरेको छ । फेसबुकको स्वामित्वमा रहेको ह्वाट्सएपमा अब फेसबुक र स्काइपमा जस्तै भिडियो कल गर्न सकिने फिचर उपलब्ध […]
ह्वाट्सएप डिसेम्बर ३१ तारिखदेखि यी स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने
काठमाडौं, २१ कात्तिक । म्यासेजिंग एप ह्वाट्सएपले (WhatsApp) पुराना डिभाइसहरुमा यहि डिसेम्बर ३१ तारिखदेखि आफ्नो एप प्रयोग गर्न नसकिने गरि परिवर्तन गर्न लागेको छ । कम्पनीले विश्व बजारबाट हाल निकै […]
ह्वाट्सएपका सबै म्यासेजहरु अब पूर्ण गोप्य, सबै प्रयोगकर्तामा ‘इन्ड-टू-इन्ड’ इन्क्रिप्सन लागू
काठमाडौं, २४ चैत । विश्वको लोकप्रिय म्यासेजिंग एप ह्वाट्सएप (WhatsApp) का संदेशहरु अब कसैले ह्याक गर्न नसक्ने भएको छ । ह्वाट्सएपले सेक्यूरिटि प्रोजेक्टअन्तरगत पूर्णरुपमा इन्ड टू इन्ड इन्क्रीप्सन (end-to-end encryption) […]
काठमाडौं, ५ माघ । मोबाईल म्यासेजिंग सर्भिस एप ह्वाटसएपले आफ्नो वार्षिक सब्सक्रिप्सन फीको प्राबधान हटाएको छ । ह्वाटसएपको सेवा पहिलो वर्ष प्रयोगकर्ताहरु सबैको लागि निशुल्क भएपनि त्यसपछिका वर्षहरुमा कम्पनीले रकम […]